श्रीमान’का यी साना गल्ति’ले यसरी बि’ग्रिन्छन् श्रीमती.. – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजनश्रीमान’का यी साना गल्ति’ले यसरी बि’ग्रिन्छन् श्रीमती..
November 24, 2020 admin मनोरंजन 5225
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बि’ग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् । श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको मस्ती, विदेशमा श्रीमानलाई सास्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग मस्ती, जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक जसो समाचारपत्रमा आइरहेका छन् ।सुनौलो सपना बोकेर विदेशीएका श्रीमानले पठाएको पैसा नेपालमा बसेर अर्कैलाई ख्वाउने, प्याउने र अन्त्यमा श्रीमानको सबै कमाई कुम्ल्याएर अर्कैसंग भागेका कुराहरु हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं । प्रायः आफ्नै लापर’बाही र धेरै बिश्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पी’डितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ ।आखिर के कारणले हो त ? बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बिग्रिनु ? उनीहरुका श्रीमतिहरु ग’लतबाटो रोज्न ? एउटा तितो एथार्थ हामीले विभिन्न पिडित व्यक्तिका अनुभवहरुलाई मार्फत संकलन गरी प्रस्तुत गरेका छौं । यसको मतलव यो होइन की विदेशमा गएका सबैका श्रीमति नेपालमा बिग्रिएका छन् ।
दिनहुँजसो आइरहेका समाचारहरु हेर्दा गलत बाटो अपनाउने श्रीमतिका श्रीमान कि त वैदेशिक रोजगारीमा हुन्छन् या त उनीभन्दा टाढा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै आफ्नो श्रीमतिलाई सहीबाटोमा लगाउन बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसका लागि यी उपाय अपानाउँदा राम्रो हुन्छ ।श्रीमिति लार्इ कत्ति पनि फ्री नछोड्नुहोस् । श्रीमतीका हरेक भनाइमा चनाखो रहनुहोस् । उनलाई व्यस्त राख्नुहोस् किनकी उनले नानाथरी कुरा दिमागमा आउने अवस्था नबनाउनुहोस् । उनि के गर्दै छिन् ,कहाँ जादै छिन् किन जादै छिन् , हरेक कुरो को जानकारी लिने गर्नुपर्छ । धेरै माया गर्छु भन्दैमा धेरै विश्वास गर्नु राम्रो हुँदैन ।घरमा एक्लै नछाड्नुहोस्, आफू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने श्रीमतिलाई घरपरिवारसंगै राख्नुहोस् । सक्नुहुन्छ गाउँमै लगेर राख्नुहोस् । आमा बाबुसंग, शहर केन्द्रित ठाउँमा एक्लै नछाड्नुहोस् । यदी शहरमा राख्नै पर्ने बाध्यता भए उनीप्रति चनाखो बन्नुहोस् । उनको बारेमा जानकारी लिने माध्याम बनाएरै जानुहोस् ।यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
November 3, 2020 admin मनोरंजन 12986
August 2, 2020 Administer अन्तर्राष्ट्रिय, भिडियो, मनोरंजन 18330
November 29, 2020 admin मनोरंजन 3959